Kooxaha Man United iyo Chelsea oo la filayo inay sameeyaan heshiis ay isku dhaafsanayaan laba xidig muhiim ah – Gool FM
(England) 05 Agoosto 2018. Sida ay shaacnayaa wargeysyada gudaha dalka England kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa kusii dhawaanayaa inay dhaafsadaan laba xidig inta lagu jiro suuqan xagaaga.
Wargeyska “Daily Mail” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Anthony Martial uu kusii dhawaanayo inuu isaga dhaqaaqo kooxda Red Devils.
Jose Mourinho ayaa la aaminsan yahay inuu doonayo in laacibka reer France ee haatan da’adiisu tahay 22 jir uu ka diro kooxda Manchester United.
Macalinka reer Portugal ayaa taas badalkeeda si xoogan u xiiseenaya inuu lasoo saxiixdo xidiga reer Brazil iyo kooxda Chelsea Willian Borges.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Mourinho uusan wali ka niyad jabin rabitaankiisa saxiixa Willian, wuxuuna markan qorsheenayaa in heshiiska uu ku doonayo uu qeyb kaga dhigo Anthony Martial, si kaliya uu u helo adeega Willian
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in labada xidig Willian iyo Martia ay suuqa kaga qiimeysan yihiin aduun isku mid ah ee gaarsiisan 75 milyan oo gani, sidaas darteed waxaan jiri doonin wa qarashaad ee dheeri ah.
Sergio Aguero oo noqday Laacibkii ugu horreeyay ee....+SAWIRRO